DHAGAYSO:War cusub oo kasoo kordhay Buuhoodle & Beelaha qaarkood oo ku dhawaaqay go’aan aysan ku farxin Puntland
#2876 (no title)
October 21, 2019 Mahad Jama 0
BUUHOODLE(P-TIMES)– Iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ay ka socdeen gudaha magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn soo xulista xildhibaanada gollaha deegaanka Buuhoodle ee Puntland isla markaasna uu hadheeyey khilaaf xoogani soo xulistooda ayaa waxaa arimahaasi ka hadlay Beesha Cali Gari Axmed oo kamid ah Beelaha Buuhoodle oo ka dhawaajisay in aysan ku qanacsanayn nidaamka loo maray soo xulista xildhibaanadaasi.
Odayaal, Waxgarad, Aqoon yahano iyo Ganacsato kasoo jeeda Beesha oo shir ku qabatay magaalada Buuhoodle ayaa ku dhawaaqay in aysan aqoonsanayn wixii haatan ka dambeeya nidaamkasta oo loo maray soo xulista xildhibaanada gollaha deegaanka Buuhoodle, iyagoona ka dhawaajiyey in aysan helin xuquuqdoodii saami qaybsi.
HALKAN HOOSE KA DHAGAYSO CODKA
Beesha Cali Gari Axmed oo laga siiyey xildhibaanada gollaha deegaanka Buuhoodle Lix xubnood ayaa sheegay in xubnahaasi aysan xaq u lahayn isla markaasna qaadan doonin waa sida ay hadalka u dhigeene.
Waxa ay sheegeen in saami qaybsi sax ah aanan la samayn ayna aqbali doonin natiijo kasta oo kasoo baxda dhismaha gollaha deegaanka Buuhoodle ilaa laga saxo amaba inta ay ka helayaan xuquuqdooda.
Dhisamaha gollaha deegaanka Buuhoodle ayaa waxaa hadheeyey khilaaf xoogan, waxaana ay dhamaanba xubnaha xildhibaanadu ay ka kooban yihiin 27 xildhibaan.
Beelaha Buuhoodle ayaa hore ugu dhawaaqay in saami ahaan xuquuqdoodii aysan helin, waxaana ay Wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ugu baaqeen in ay soo fara galiso arintani kadib markii isku qab qabsi uu ku yimid tirada la doonayo oo aad u yar.
U Sii Gudbi Asxaabtaada
Wasaarad muhiim u ah Puntland oo la xiray & Shaqaalaheedii oo la kala diray kadib markii…
Madaxweyne Denni oo Nairobi ka bilaabay arin halis ku ah DFS
Xoolihii ugu badnaa ee loo qaado Imaaraadka oo laga dhoofiyey Bosaso
DAAWO VIDEO:Deg Deg Turkiga,UK,Sweden QM oo Muuse Biixi U Hanjabey Hadusan la Hadal Farmaajo.
Saaxiibada madaxweyne Denni oo looga awood roonaaday arin Bosaso ka sababtay xiisad dagaal
Dowladda Somalia oo muwaadin Soomaaliyeed u dhiibtay dalshisheeye
Xarun u muhiim ah Dalka & Dowladda Somalia oo dab bur buriyey
Fanaankii Shabaabka noqday oo war cusub kasoo kordhay & Al-Shabaab oo..
DHAGAYSO:Maxaad ka taqaan fanaankii Al-shabaabka ee Muqdisho lagu qabtay?
DAAWO:Shil khasaare gaystay oo ka dhacay Muqdisho
DEG DEG:Duleedka Laascaanood oo xabadu afka ka bixin, Ciidamada Ina Cambaashe & Kuwa kale oo dagaal ka dhex qarxi rabo
Askari ka tirsan ciidamada Somaliland oo lagu dilay deegaanka Qurilugud
DEG DEG:Muuse Biixi oo qorshaynaya dagaal ka dhex qarxa Puntland & Somaliland
DAAWO VIDEO :Xog Yaab Ah Magacyada Fanaanin muqdisho Shabaab Qirtay Muqdisho hooyada Xata Ha Aminin